Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Brezila Faly amin'ny fivoriana ao amin'ny Expo Dubai 2020
Airlines • Aviation • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao farany UAE
Ny filohan'ny Embratur (Agence Breziliana ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany iraisam-pirenena), Carlos Brito, ary ny minisitry ny fizahan-tany, Gilson Machado Neto, dia noraisin'ny talen'ny CEO an'ny Emirates Airlines, Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum ny 3 Oktobra 2021. The tanjon'ny fihaonana, natao nandritra ny hetsika Expo Dubai 2020, dia ny hampitombo ny fifandraisan'ny sidina mankany Brezila avy any Dubai sy hub'ny Emirates hafa, mifantoka amin'ny Amazon sy ny Avaratra Atsinanan'i Brezila.
Misy sidina 110 eran'izao tontolo izao avy any São Paulo nomen'ny Emirates.
Rehefa tonga any Brezila indray ny sidina Emirates, dia handefa doka dokam-barotra i Brezila mba hampiroboroboana ireo toerana any Brezila any UAE sy ireo ivon-toerana iraisampirenena lehibe hafa.
Expo Dubai 2020 dia manana fandraisana anjaran'ny firenena 190 ary tombanana ho mpihaino olona manodidina ny 25 tapitrisa mandritra ny hetsika.
Avy any São Paulo, Emirates dia manolotra sidina 110 manerantany. “Ireo izay efa nanana fotoana hirosoana amin'ny sidina Emirates dia afaka manamafy ny zotom-po itondran'izy ireo ny mpandeha, miaraka amin'ny fiaramanidina maoderina sy serivisy izay mampifaly ny traikefa amin'ny sidina. Rehefa manomboka manolotra toerana itodiana Breziliana bebe kokoa ny orinasa dia azonay antoka fa ho avo ny fangatahana. Hampitombo ny isan'ny mpizahatany iraisam-pirenena tonga eto amintsika izany », hoy ny minisitra Gilson Machado Neto.
Ny Filoham-pirenena Embratur ary ny minisitry ny fizahantany dia nanondro tamin'i Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum fa tonga indray ny sidina Emirates any Brezila, i Brazil dia hanao doka amin'ny fanaovana dokambarotra hampiroboroboana ireo toerana Breziliana ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy ireo foibe iraisam-pirenena lehibe hafa. "Ny fampiasam-bolantsika ho fampidirana ireo vokatra Breziliana sy toerana itodiana dia hiompana amin'ny hetsika fananganana fifandraisana amin'ny varotra eo an-toerana, toy ny fiofanana, latabatra fandraharahana, famtours, ankoatry ny hetsika ataon'ny besinimaro farany," hoy ny fanazavan'ny minisitra.
Tamin'ny fitokanana ny Pavilion Brezila tao amin'ny Expo Dubai 2020, ny filohan'ny Embratur, Carlos Brito, dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjaran'i Brezila amin'ny hetsika toa ny Expo Dubai. “Ny fampiroboroboana ny firenentsika any ivelany dia mbola ilaina kokoa amin'ity scenario ity amin'ny fampitomboana ny vaksiny sy ny famerenana tsimoramora ny dia. Mila mahalala izao fizahan-tany izao tontolo izao, ”hoy izy. Anisan'ireo hetsika nomanin'ny Embratur sy ny Ministeran'ny fizahan-tany ho an'ny foara ny fitsidihana ireo mpitsidika, hetsika ara-kolontsaina, fampiratiana misy sary sy asa-tanana, mozika sy dihy mahazatra an'ny faritra Breziliana rehetra. Ho fanampin'izay, Embratur koa dia mikasa ny hanao hetsika ho an'ny traikefa marika hampitomboana ny fifandraisan'ny mpitsidika ary hizara fitaovana fampiroboroboana.
Filohan'ny Embratur Carlos Brito
Ny filohan'ny Embratur sy ny minisitry ny fizahantany koa dia nanomana fihaonana amin'ireo solontena iraisampirenena mandritra ny Expo, ao anatin'izany ny fakan-kevitra amin'ny praiminisitra lefitra ary ny fampandrosoana ny toekarena sy ny teknolojia any Slovenia, Zdravko Počivalšek, ary ny sekretera misahana ny fizahantany San Marino Frederico Amati. Ny fifanarahana roa tonta eo amin'i Brezila sy i Slovenia dia tokony hatao sonia mandritra ny fandraisan'anjaran'ny Embratur sy ny Minisiteran'ny fizahantany amin'ny "Herinandron'i Brezila", natao teo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 15 Novambra, tao amin'ny Expo Dubai 2020.
Ny fizahan-tany Breziliana dia misolo tena ny fihetsiky ny Embratur (maso ivoho Breziliana ho an'ny fampiroboroboana ny fizahantany iraisam-pirenena) tao amin'ny Expo Dubai 2020. Amin'ny fotoana roa, ny maso misahana ny zaridaina Breziliana dia manantona any amin'ny Emira Arabo Mitambatra: amin'ny fanokafana, eo anelanelan'ny 1 sy 9 Oktobra , ary mandritra ny Herinandron'i Brezila, ny 9-15 Novambra. Atao isaky ny dimy taona ary heverina ho iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra eto an-tany, ny World Expos dia misy ifandraisany amin'ny fampisehoana firenena. Izy ireo dia mifantoka indrindra amin'ny fanavaozana sy ny famokarana orinasa. Nahemotra tamin'ny herintaona noho ny areti-mandringana COVID-19, Expo Dubai 2020, izay nahemotra noho ny COVID-19 ary atao amin'ny 1 Oktobra 2021 ka hatramin'ny 31 martsa 2022, dia nandray anjara tamina firenena 190 ary tombanana ho mpanatrika olona 25 tapitrisa eo ho eo mandritra ny enim-bolana ny hetsika.